Accueil > Gazetin'ny nosy > Filankevim-panjakana : Tsy nanaiky ny fitorian’i Tabera sy Guy Maxime
Filankevim-panjakana : Tsy nanaiky ny fitorian’i Tabera sy Guy Maxime
Tao anatin’ny tapa-bolana izao dia isan’ny vaovao lehibe teto Madagasikara ny mahakasika ny fitorian’ingahy Tabera Randriamanantsoa sy Guy Maxime Ralaiseheno ny fanjakana tarihin’ingahy Ntsay Christian noho ny fiantsoana ny mpifidy amin’ny fifidianana izay hatao ny 7 novambra 2018 izao. Voalazan’izy ireo araka ny fitoriana nataony io fa tsy ampy 90 andro izany filazana izany araka ny Lalàmpanorenana.
Raha tokony ho tamin’ny herinandro lasa iny no notsarana ity raharaha ity dia nahemotra ny fitsarana tao amin’ny filankevi-panjakana omaly 11 septambra 2018 izany. Nanantena nefa ireo mpitory ireo fa tokony ho natao tamin’izay fotoana izay ny fitsarana. Ny antony hoy izy ireo dia ny hivoahan’ny didy alohan’ny hametrahan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fialany tsy ho filohan’ny repoblika.
Na dia fitsarana ny antontan-taratasy fitoriana no fepetra takian’ny lalàna, dia nohenoina ihany ny andaniny sy ny ankilany tamin’izany. Tamin’izany no nahafantarana fa niaro tena mafy ny mpomba ny fanjakana tamin’ny alalan’ny DLC “Direction de la législation et de contentieux” avy eny amin’ny fiadidiana ny primatiora. Nahatratra folo mahery ry zareo no tonga nanatrika ity raharaha ity. Na dia ny talen’ny DLC aza no olona tokana tokony hahazo hiaro izany fiampangana izany dia nitalaho tamin’ny mpitsara izy ireo ny hahazoan’ny talen’ny kabinetran’ny Praiminisitra Ntsay Christian fitenenana koa. Maro dia maro ny mpanolotsaina tonga nifarimbona tamin’ireto ekipan’ny praiminisitra ireto. Midika izany fa nisy tokoa ny fahatahorana avy any amn’ny governemanta tamin’ity raharaha ity.
Ankilany indray dia tonga nanatrika ity fitsarana ity ingahy Tabera Randriamanantsoa izay isan’ny mpitory. Tsy tonga ingahy Guy Maxime Ralaiseheno. Maro dia maro koa ny mpomba azy ireo no tonga teny amin’ny fitsarana tampony. Toa ny vary sosoa voatapo-drano nefa izy ireo rehefa nivoaka ny didy satria tsy nahazo rariny ireo mpitory.
Vita izany iny raharaha iny ka inona indray no hitranga eto amin’ny firenena?
Ny zava-misy aloha dia mizara roa tanteraka ny raharaha amin’ity fanatanterahana ny fifidianana ity na dia efa mazava ny voalazan’ny lalàna fehizoro milaza ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny faha 7 novambra 2018 izao. Misy ny mpanao pôlitika izay manaraka ny voalaza ny lalàna io, ary maro koa no tsy mankasitraka izany. Maro amin’izy ireo no kandidà hofidiana amin’io faha 7 novambra 2018 io. Maro koa anefa ny olon-tsotra no mbola mametraka fanontaniana ny hisian’ny fifidianana na tsia. Ireo rehetra ireo dia milaza fa tsy misy ny fitoniana sy ny filaminana amin’ny raharaham-pirenena.
Maro ny olona niandry mafy ny vokatra ny fitsarana noraisin’ny filankevi-panjakana iny, na olon-tsotra na ny mpanao pôlitika. Milaza moa ry Tabera Randriamanantsoa fa tsy hipetraka amin’izao fa mbola hanohy ny fitakiany.